Tatitry ny Mpisera: Mifantoka Amin’ny Google Sy Amin’ireo Fampiasa Fandefasana Hafatra Ireo Mpanaramaso Sinoa Mialoha Ny Tsingerintaona Faha-25 -n’ny Tiananmen · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Mey 2019 8:35 GMT
Sary nakarin'i Shekhar_Sahu teo amin'ny Flickr, CC NC-ND-2.0
Lisa Ferguson, Alex Laverty, Bojan Perkov, Sarah Myers ary Sahar Habib Ghazi no nandray anjara tamin'ity tatitra ity.
Atolotry ny Tatitry ny Mpisera avy amin'ny Global Voces Advox ireo topimason'ny fanamby iraisam-pirenena, ireo fandresena ary ireo fironana vao mipongatra mikasika ny zo fahazoana Aterineto erantany. Manomboka ao Shina ny tatitra amin'ity herinandro ity, izay andro maromaro mialohan'ny tsingerintaona faha-25 -n'ilay fandringanana olona tao Tiananmen, dia nosakanan'ny governemanta ny fidirana amin'ireo tolotra rehetra misy soramiafina na tsia, ampiasain'ny Google ao amin'ny firenena ary nambaran'ny governemanta ny fisian'ny vava-ady iray vaovao anatin'ny adiny hanoherana ireo “tsaho anaty tambajotra”: fampiasa fandefasana hafatra amin'ny aterineto. Ny WeChat an'ny Tencent sy ireo mitovitovy aminy no niomanan”ny governemanta hopetahana famaizana iray volana atao amin'ireo fandefasana hafatra sosialy.
Tsy mbola hay raha toa ka mandalo fotsiny ny fanakanana manjo ny Google na tsia, nefa tamin'iny faran'ny herionadro lasa iny dia niteraka fitontonganan'ny fivezivezena anaty aterineto ho an'ity ngeza indrindra amin'ny Aterineto ity tao Shina ho 50%. Ny mpanaramaso ny sivana, GreatFire.org dia namaritra azy io ho “ny sivana faran'izay masiaka indrindra hatrizay”. Nanolo-kevitra ny Google ihany koa izy mba hanova ny soramiafiny mba hahafahan'ireo mpampiasa Aterineto handingana ilay sakana ary hanome rohy izay azo ampiasain'ireo mpampiasa Aterineto ao Shina hahazoany an'ireo tolotry ny Google.
Raràn'ny governemanta Sinoa avokoa izay rehetra karazana adihevitra ivelany sy anatin'ny tambajotra mikasika ireo hetsipanoherana tao Tiananmen, hetsika iray anisany tena feno rà nandriaka tamin'ireo hetsika rehetra tanatin'ny tantara maoderin'i Beijing. An-jatony vitsivitsy ka hatramin'ny an'arivony maro no isa voavinavina mikasika an'ireo maty tamin'ny 4 jona 1989.
Fanehoankevitra malalaka: Ametrahan'i Rosia fitsipika henjana ny mikasika ireo fandoavam-bola amin'ny tambajotra
Ny lalàna iray vaovao ao Rosia dia mametra an'ireo fifanakalozana ara-bola tsy mitononana anrana amin'ny tambajotra mankany amin'ireo fikambanana ary mandràra an'ireo famindràna vola tsy mitonona anarana ifanaovan'ny samy olon-tsotra aty anaty tambajotra . Manan-kery avy hatrany ilay lalàna amin'ity fahavaratra ity ary anisany sivana tsy mitsaha-mitombo be ataon'ny governemanta amin'ny RuNet.
Hosoka: mpiara-manorina ny Pirate Bay voasambotra tao Soeda
Miatrika famonjana valo volana an-tranomaizina i Peter Sunde, araka ny voalazan'ny lahatsoratra iray an'i Cory Doctorow teo amin'ny blaoginy. Mitranga ny fisamborana azy taorian'ny andiana antso hanamelohana azy noho ny fitarihany ny tranonkala torrent.
Fanarahamaso: aorian'ireo ‘selfies’ ataonareo ny NSA
Araka ny voalazan'ny New York Times, angonin'ny National Security Agency (NSA) ireo sarin'endrika an-tapitrisany nalaina antsokosoko avy amin'ny imailaka, ny media sosialy, ny hafatra an-tsoratra ary ireo serasera nomerika amin'ny endrika hafa, ho ampiasaina ao anatin'ireo fandaharanasa tena raitra natao ho famantarana endrika mba hitsongoana dia an'ireo fandrahonana ary ho ampiasaina anatin'ireo asa hafa fitsikilovana.
Indostria: afaka miangavy ny Google ny olompirenena avy amin'ny Firaisambe Eoropeana mba hamafa ny angona momba azy tsy ho hita anatin'ireo vokatry ny fikarohana.
Ho valin'ny fanapahankevitry ny fitsaràna ao amin'ny Firaisambe Eoropeana manamafy ny “zo mba ho adino”, nandefa taratasy fenoina iray ny Google hahafahan'ireo olom-pirenena avy amin'ny Firaisambe Eoropeana mangataka ny hamafàna ny angona momba azy ireo tsy ho hita anatin'ireo vokatry ny fikarohana.
Aterineto tsy mandry fahalemana: Manohintohina ireo solosaina amerikana ireo Iraniana piraty arifomba
Manamafy ny tatitry ny iSight Partners, orinasa iray misahana fiarovana informatika, fa misy ifandraisany amin'ny vondron'ireo Iraniàna mpijirika ny fahasimbana solosaina amerikana miisa 2.000 ny cyberespionage iray, fahavoazana avy amin'ireo kaonty hosoka Facebook nandritra ny telo taona. Koa satria tsy malaza ho manana fahaizana ara-teknika loatra ireo iraniàna mpijirika, nanome sosokevitra ny hetsika iray antsoina hoe Newscaster tao anaty tatitra fa mety ho arifomba kokoa tsy araka ny tokony ho izy ny fahaizamanaon'izy ireo.
Zavatra mahafinaritra: feno 25 taona ny LOL
Raha hitanao fa tsy azo atao ny hieritreritra tontolo iray tsy misy lolcats, mety ho anao ity tsingerintaona ity: feno 25 taona tamin'ny 8 May 2014 ny fanafohezana LOL. Hita tao anatin'ny lahatsoratry ny Fidonet Association ny fampiasana voalohany neken'ny rehetra an'io fiteny io, voatery teo anelanelan'ny lahatsoratra iray mikasika ny fangaron'ireo mofomamy sy ny ady nokleary – mikasika an'izay rehetra tianao ho fantatra mikasika ny tantaran'ny LOL, jereo ity lahatsoratry ny Guardian ity.
Tsy mbola haingana tahaka izany ny fankanesana eny amin'ny volana sy ny fiverenana – ny NASA sy ny MIT izao dia andalana amin'ny fampahalalàna ny vokatr'ireo andrana nampiasàna ‘laser’ mba hampitàna vaovao eny amin'ny volana, azo tamin'ireo hafainganam-pandeha amin'ny fampakarana sy ny fitrohana angondrakitra, araka ny voalazan'ny gazety boky TIME.
(amin'ny teny anglisy ny rohy rehetra)
Ny toeran'ny fahalalahan'ny aterineto ao Afrika Atsinanana, 2014 – Fiarahamiasa momba ny politika iraisampirenena momba ny TIC ao Atsinanana sy Atsimon'i Afrika (CIPESA)
Internet Trends 2014: Code Conference — an'i Mary Meeker
Miankindoha amin'ny halatra anaty habaka nomerika: Fanadihadiana momba ny anjara toeran'ny fiankinandoha ao anatin'ny Fijirihana Nomerika (Famintinana) — Jordana Navarro, sy al.
Manaova famandrihana hahazo ny Tatitry ny Mpisera (Netizen Report) amin'ny alalan'ny imailaka